Ungazigcina kanjani izandiso zezinwele zakho ebusuku (i-Beauty Hack) – SL Raw Virgin Hair LLC.
Ungazigcina kanjani izandiso zezinwele zakho ebusuku (i-Beauty Hack)
Ukulondoloza izandiso zezinwele zakho ebusuku akuyona inqubo enzima kangako.
Futhi uma wenza kahle, uzoba nezandiso zezinwele zakho ezihlala isikhathi eside njengoba ungathanda futhi.
Futhi, ungakwazi ukuvuka uhambe ngaphandle kokukhathazeka ngokulimaza izandiso zakho, futhi ungavuka nezinwele ezithambile, ezingahlangani ngakusasa ekuseni.
Sinikeze izindlela ezimbalwa ngokusekelwe ohlotsheni lwezinwele ezinwetshiwe onalo kanye nobude.
Amathuluzi abalulekile okulondoloza izandiso zezinwele zakho ebusuku:
Ibhulashi/ikama lezinyo elibanzi
Ulala kanjani emthungeni wakho kuzandiso
Le nqubo isiza ukufaka kwakho kuhlale isikhathi eside. Ngakho-ke, uma indlela yakho yokuthunga ihloselwe ukuthi ama-weft ahlale endaweni izinyanga ezimbalwa, kufanele ube nenqubo elula nesebenzayo yokuyigcina inakekelwe ubusuku bonke.
Qala ngokusika izandiso zezinwele zakho ngebhulashi elinqamulayo noma ikama lamazinyo elibanzi. Ungakwazi futhi ukwengeza i-leave-in kancane ukuze ulungise izinwele futhi wengeze umswakama omncane. Kodwa khumbula ukuthi ungayisebenzisi ngokweqile imikhiqizo yezinwele njengoba lokhu kuzokwenza izinwele zakho zibe ngamafutha futhi zinamathele.
Donsela izandiso zezinwele zakho uzibuyisele kumsila wehhashi noma ibhuni futhi uzivikele ngethayi yezinwele. Bese ubopha phansi ipherimitha yokufaka kwakho ngesikhafu se-satin noma sikasilika.
Ekugcineni, vala izandiso zakho ngebhonethi ye-satin. Ungasebenzisa isikhafu se-satin ukuze ubambe isikhafu se-satin ngesikhafu sakho sikasilika.
Ungaphinda ulale nezinwele kubhani noma umsila wehhashi ngaphandle kwebhonethi ye-satin uma ulele phezu komcamelo kasilika. Uma ungenayo i-satin/umcamelo kasilika, ngakho-ke sincoma ukusebenzisa ibhonethi.
Ngezandiso zezinwele zemvelo ezinde, eziqondile:
Ukugcina izinwele zakho zivikelekile ebusuku ukuze ulondoloze izandiso zakho zezinwele zingalandela indlela efanayo abanye bethu abayisebenzisayo ukunakekela izinwele ezikhululekile ebusuku.
Inketho 1. Gcoba izinwele zakho usebenzisa ikamu kanye nebhulashi. Bese umboza ngesikhafu sakho se-satin/sikasilika bese ulala phezu komcamelo kasilika. Kuyiqiniso, ngokuzijwayeza ungaqeqesha izandiso zakho zezinwele ukuthi zisongwe. Khumbula ukuthi kungase kudingeke ubekezele ngale ndlela, njengoba ngokufaka okusha ukugoqa kwezinwele kungase kuwele kalula, kodwa phakathi nesonto lokuqeqeshwa uzobe ugoqa izandiso zakho zezinwele ngokushesha.
Inketho 2. Yenza ama-twist braids amabili, eyodwa nhlangothi zombili zekhanda. Bese ubamba iziphetho zibe umsila wehhashi/ibhani. Sebenzisa ibhande lasekhanda noma isikhafu ukuze ubeke phansi imiphetho. Bese umboza ngebhonethi yakho ye-satin/silika bese ulala phezu komcamelo kasilika. Le nqubo inhle kulabo abafake izinwele ezivela SL Raw Kinky Curly Collection noma SL Raw Deep Curly Collection.
Le nqubo igcina izinwele zakho zingagodoli, zinganyakazeki, futhi zome ebusuku, njengoba kungenzeka ngezicamelo zikakotini.
Susa futhi ugcine izandiso zezinwele ngaphambi kokulala
Ukuze uthole izandiso zezinwele ezithile njengeziqeshana namawigi athile, kungcono ukuzikhipha/ukuzikhumule ngaphambi kokuyolala. Lena indlela yokulondoloza engcono kakhulu yokuqinisekisa ukuthi ugcina lezi zandiso zivikelekile.
Ukugqoka ama-clip-ins akho embhedeni kungaholela ekubambeni futhi okungalimaza izinwele zakho nezandiso zakho. Ukuzisusa kukuvumela ukuthi ugcine izinwele zibheke phansi futhi zilungele ukusetshenziswa ngakusasa. Futhi njengoba ukufaka isiqeshana singewona umsebenzi odla isikhathi, lokhu kuyinto ongayenza kalula ekuseni.
Kumawigi, ungawagcina ekhanda lewigi, noma endaweni yokubeka iwigi uma uzoyigqoka ekuseni.
SL Amathiphu Aluhlaza:
Ungalali nezinwele ezimanzi. Lona umgwaqo oya emafindoni aqinile nama-tangles, ngisho nezandiso zezinwele zemvelo ezi-RAW eziphezulu zekhwalithi ephezulu.
Manje njengoba usukwazi ukulondoloza izandiso zezinwele zakho ebusuku, asikho isidingo sokukhathazeka ngokugcina ama-tresses akho athandekayo eqinile futhi elungele ukuwabulala ngosuku olulandelayo.
Tags: Beautifu Hair, Beauty blogger, beauty trends, do's and dont's, everyday routine, hair care, hair education, hair hacks, Hair talk, hair tips, haircare, how to care, night hair routine, poor beauty habits, weave wearers